Akụkọ - Ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị mma na nkeji nke anọ
Ahịa ahịa valvụ dị ezigbo mma na nkeji nke anọ
N'ime ụzọ atọ mbụ nke 2016, akụ na ụba mba na-aga n'ihu na-eto n'ike n'ike, yana mmụba GDP nke 11.5%, nke nyere ahịa valvụ bọọlụ ezigbo omume. Otú ọ dị, ọnọdụ nke ikpo oke ọkụ akụ na ụba na-aga n'ihu, na enwere nsogbu ụfọdụ pụtara ìhè nke nwere ike ịgbanwe akụ na ụba na ikpo oke ọkụ, nke chọrọ ngwa ngwa ka ejiri ya kpọrọ ihe. A na-atụ anya na mmụba nke ịrị elu akụ na ụba na nkeji nke anọ agaghị agbanwe. Banyere ụlọ ọrụ valvụ ahụ, enwere ọtụtụ ihe na-emetụta ya, bụ ndị kwesịrị nlebara anya.
Ka ọ dị ugbu a, mba m nwere nnukwu ọchịchọ maka melite valvụ na mmelite teknụzụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke nyocha ahịa na omume, ụlọ ọrụ valvụ kwesịrị ịbụ onye ọsụ ụzọ kacha nwee ahụmahụ na-ekere òkè na iwu. Karịsịa site na iwebata iwu enyemaka ego valvụ na 2014, ọkwa nke valvụ na mba m abaala na ọkwa ọhụrụ. Valtù Na-ahụ Maka Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Vallọ Ọrụ nke China ewepụtala atụmatụ mbido maka mgbanwe teknụzụ nke ụlọ ọrụ akụrụngwa ọrụ ugbo na-akwado ego ego mba na 2008, ma kwenyere na nkwado ego iji ụgwọ mba ga-abawanye n'afọ na-esote.
Site na mkpa nke ụlọ, enwere ọtụtụ ihe dị mma, oriri na mkpochapu teknụzụ na akụrụngwa, machibido mbubata teknụzụ ụlọ dị iche iche mepụtara ikike, kagbuo iwu ụtụ isi maka igwe zuru oke na akụrụngwa zuru oke, mejuputa ụtụ ihe mkpali na ụtụ isi maka isi ihe, ma tinye ụtụ isi na China’s valvụ dị ọkụ na injinia. , Ngwaọrụ igwe, na akụrụngwa mmanụ. Mwube nke okporo ụzọ ụgbọ oloko (gụnyere ụgbọ okporo ígwè ọsọ ọsọ) agbatịwo ọsọ ọsọ. Ogologo ego a na-etinye kwa afọ na 2007-2010 gafere ijeri yuan 300, na iwu okporo ụzọ ime obodo ọhụrụ ga-etinye ihe karịrị ijeri yuan 400. , Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè ga-arụ ọrụ dị ukwuu n'ịkwọ ụgbọala; imechi obere obere obere kool na ịzụlite otu buru ibu, na-akpụ otu ijeri iche-iche iche-ijeri iche-iche, na ihe ndị ọzọ, ga-eweta ahịa sara mbara maka mmepe nke valvụ m na ebe a na-egwupụta kol. Na mgbakwunye, n'ahịa esenidụt, ọganihu akụrụngwa na-abawanye na Africa, South America, South Asia na Eastern Europe ka malitere, oghere ahịa ahụ dịkwa ukwuu. Nke a ga - abụrịrị isi ahịa maka ụlọ ọrụ ụlọ iji chọpụta mba ofesi n'ọdịnihu.
Site na nchọnchọ nke mpụga na mbubata mbubata, China’s usoro mmepe obodo akabeghị kpamkpam, na iwu nke obodo ọhụrụ na-agbanye n'ike n'ike. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa valvụ nke ụlọ nwere nnukwu ọganihu na ogo na ọrụ, na nnọchi nke ụdị mba ọzọ na-aga n'ihu. Ya mere, a na-atụ anya na afọ atọ mbụ ga-abụ oge uto ngwa ngwa na agụụ maka injinịa valvụ.
Post oge: Mee-22-2021